पहिलो ग्रिस… बढी सेक्स कुन-कुन देशकाले गर्छन् ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
पहिलो ग्रिस… बढी सेक्स कुन-कुन देशकाले गर्छन् ?
एक अध्ययन अनुसार ग्रिसका मानिसहरु सरदरमा वर्षको १६४ पटक यौनसम्पर्क राख्ने गरेको गरिएको छ । ग्रिसपछि ब्राजिल रहेको छ । ब्राजिलका मानिसहरु वर्षमा १४५ पटक यौनसम्पर्क गर्ने गरेको बताइन्छ । रसिया र पोल्याण्डका मानिसहरु वर्षमा सरदर १४३ पटक यौनसम्पर्क राख्ने गरेको खुलेको छ ।
यौन सबै तिर चर्चा र वहस हुने विषय हो । हलैमात्रा गरिएको एक अन्र्तराष्ट्रिय अध्ययन अनुसार ग्रिस विश्वभरकै यौनको हिसाबले सबैभन्दा सक्रिय देशको सुचिमा परेको छ । कन्डम बनाउने एक कम्पनिले गरेको उक्त अध्ययनले उक्त तथ्य पत्ता लगाएको हो ।
यसको ठिक विपरित जपानिजहरुले सबैभन्दा कम वर्षमा ४८ पटक यौनसम्पर्क गर्ने गरेको देखिएको छ । यसैगरी जीवनमा यौनको महत्ववारे सोधिएको प्रश्नमा पनि ग्रिसका ८० प्रतिशत मानिसहरुले अत्यावश्यक भनेका छन् भने यसको ठिक विपरित थाइल्यान्डका ३८ प्रतिशतले मात्र यौनलाई महत्व दिएका छन् ।
यसैगरी कुन देशका मानिसले सवैभन्दा लामो समय यौनसम्पर्क गर्छन भनि गरिएको अध्ययनमा पनि औसात २२.३ मिनेटको रेकर्ड राख्दै ग्रिस दोस्रोमा परेको छ । पहिलोमा २४ मिनेट सहित नाइजेरिया रहेको छ । यि हुन यौनमा सबैभन्दा सक्रिय १० देशहरु, वर्षमा यति पटक गर्छन् :